The Best Mmezi Service maka gị Ngwongwo MAnagement Business
atụmatụ » mmezi
Ọ bụrụ na echekwaghị ihe onwunwe, ọ ga-amalite ịmalite mkpọtụ, na ịdọta nyocha na-adịghị mma na usoro ahụ. Nke ahụ pụtara na obibi gị na ọnụego ị nwere ike ịgba ụgwọ daa, na akara ala gị ga-amalite ịdị na-enwu gbaa na onye na-enwu ihe. Ego dị ala na akaụntụ akụ gị pụtara na ọ na-esiri ike itinye ego na iweta ihe onwunwe ahụ, na ihe na-amalite ịba ụba na njikwa.
Ya mere, ọ dị oke mkpa iji hụ na echekwara ihe onwunwe nke ọma site n'otu ụbọchị. Iji nwee ike ime nke a, achọrọ usoro nke ga - enyere gị aka ịdebe nsogbu dị iche iche, wee hụ otu gị na ndị otu gị si aga n’ihu n’idozi ha. Dika otutu PMS na ndi oru Channel n’enyeghi oru mmezi, otutu ndi oru ulo n’ezi ulo gha aghachighari ime ihe ozo dika Asana or Trello jikwaa ọrụ mmezi ha. Nke a na - emepụta enweghị ike nchịkwa ma na - emetụta uru azụmaahịa.
Kedụ ka nlekọta nlekọta mmezi Zeevou ga-esi enyere aka?
Zeevou na-enye gị ohere idobe nsogbu nsogbu gị niile. Nwere ike iji aka gị tinye nsogbu mmezi, na-agbaso onye kpara ha, na otu ha siri dị ngwa. Ọzọkwa, ịnwere ike ịgbakwunye nkọwa na bulite mgbakwunye iji gosi kpọmkwem ihe na-eme. Zeevou Fix na-enye gị ohere ịgbaso nsogbu ahụ ka ha na-aga n'ihu site na ọkwa dị iche iche.
Ọ bụrụ na onye ọbịa kọọrọ gị nsogbu, anyị ewepụtala atụmatụ nke ga - enyere gị aka ịlele ma onye otu ọrụ ekwenyela nsogbu ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị, iji zere ụgwọ ịkpọ oku dị oke ọnụ maka nsogbu nwere ike ibute site na iji ngwa ọrụ eme ihe. site na onye ọbịa dịka ọmụmaatụ karịa ezigbo esemokwu na ha.
Ihe bụ ihe ọzọ, ndị Zeevou Mobile App na-enye ndị ọrụ ụlọ ohere ka ha kọọ akụkọ mmezi na ebe nhicha, yana itinye foto ma ọ bụ vidiyo na okwu a na nkọwa nke ihe mebiri.
na n'ọdịnihu, anyị ga-arụ ọrụ na ikwe ka ndị ọrụ nwee ike idozi nsogbu, ka ha wee nwee ike ịlele ọrụ ma melite gị na ọganihu site na Zeevou Mobile App.